Ngosipụta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya, SEO, na Mmetụta Ya na ibe ya | Martech Zone
Matt Cutts keere vidio ebe ọ na-atụle ihe ịma aka nke ndị injinia nwere ike ịnwe ma ọ bụrụ na ha ekepụtara ịdabere na Google algorithms na akara ngosi mmekọrịta. Na nkenke, ọ ga-abụ ihe dị ize ndụ iji wuo ndị a dabere na ihe omume nke usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ ma egbochiri ọchụchọ ma ọ bụ na-ewu ewu.
Obi abụọ adịghị m na nke a bụ ikpe, mana na asịrị nọgide dị ka ndị ọrụ nchọta ihe nchọta na-ahụkarị mmekọrịta dị n'etiti isiokwu mmekọrịta mmadụ na ibe ya na usoro nchọta na-agbanwe agbanwe. Dị ka Matt kwughachiri, nke ahụ abụghị ihe kpatara ya. Anyị na-na na na-akọrọ anyị echiche na mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na SEO ugbua, mana ka anyị tụlee akara mmekọrịta mmadụ na otu esi emekọrịta ha abụọ.
Ndị na-akwado na ndị na-eso ụzọ - Ọ bụrụ na ị bụ onye guzosiri ike, ama ama ikike na ụlọ ọrụ gị, ohere ga-adị mma na edere gị gbasara ịntanetị. Ikekwe ị kwuru okwu na ihe omume, gbaa ajụjụ ọnụ, dee usoro, ma ọ bụ mee ka ndị mmadụ kwuo ọrụ gị. Otu n'ime aha ndị ahụ, n'ezie, ga-eme ka njikọta gị abụọ dịrị. N'ezie, nnabata ahụ ga - eme ka ị sie ike n'ịntanetị ma ọ bụrụ na ị na - eji usoro mgbasa ozi. Ndị na-eso ụzọ mmadụ nwere ike ịbụ n'ụzọ dị ukwuu adịgboroja, na-eme ka ọnụ ọgụgụ ndị ahụ dị oke egwu maka ntinye ogo.
Ahịa Social - Social media na-enye otu ụzọ kachasị dị irè ma dị irè nke iji kesaa ozi n'ịntanetị na netwọk dị mkpa. Ekekọrịta ụfọdụ ihe nyocha ndị ọzọ na-adịghị ahụkebe ma ọ bụ ọdịnaya dị egwu ma ị gaghị eju gị anya mgbe ọ gbasara dịka ọkụ ọkụ wee rute ọtụtụ mmadụ. Egwuregwu ndị na-elekọta mmadụ na-abụkarị otu m si achọpụta banyere ngwaọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ọhụrụ, na-eme ka m dee banyere ha ma mepụta backlinks. Ezie na nnukwu mpịakọta nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya anaghị akpata oke, ọ ga-emetụta oke ogo.
N'ihi na enweghi ezi mmekọrịta apụtaghị na enweghị mmetụta, n'agbanyeghị. Ọ bụrụ na achọta nnukwu akụ ma ọ bụ ikpo okwu na ọchụchọ, m ga-ekekọrịta ya na akaụntụ mgbasa ozi m. Ọ bụrụ na m chọpụta ngwá ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta ma kesara ya na ndị na-ege m ntị, ọ ga - eduga na isiokwu ndị ọzọ na backlinks na - eme ogo. Yabụ ezie na enweghị ezigbo mmekọrịta, enwere nsogbu na-enweghị isi nke ọwa ọ bụla nwere ike ịnwe na nke ọzọ.
Iji ọwa abụọ ahụ ga-eme ka nsonaazụ nke ọzọ dị mma. Elegharala ohere a anya! Lee ụfọdụ ezigbo ndụmọdụ site na Okpukpe Social maka ndị na-elekọta ọrụ mgbasa ozi na-elekọta mmadụ ka ha kwekọọ na usoro njikarịcha njikwa igwe.
Social Media ringkekọrịta na-eto
Parse.ly n'oge na-adịbeghị anya wepụtara akụkọ na Facebook emeriola Google ugbu a dị ka onye na-ezo aka n'elu gaa ndị nkwusa. Mbelata a dị oke mkpa ka ndị nkwusa buru n'uche. Ọ bụrụ na ị na-agbanye mgbalị gị niile na njikarịcha nchọta yana ohere backlink, yana ị mepeghị usoro mgbasa ozi mmekọrịta, ohere ị ga-eji nweta ndị ọhụụ na-agbadata.
Tags: search engine njikarịchaAakara mgbasa ozi mmekọrịtausoro mgbasa ozi ọha na ezeatụmatụ mmekọrịta mmadụ na ibe yaakara ngosi mmekọrịtaatụmatụ mmadụ
LeadSift: Wegide Intent na Actionable na Social Media